Ị nwere ike ịkwado ịzụta backlinks site na blọọgụ netwọk (PBNs)?
Ma m, enweghị m ike ịkwado ma ọ bụ gosi gị kpọmkwem nke a ga-ebu ụzọ kpee. Ihe bụ na m onwe m na-adịghị dị ka Gray-Hat SEO, ma ọ bụ Chineke gbochie Black-okpu SEO. Na ịzụta backlinks site na netwọk onwe netwọk bụ a doro anya tabooed atụmatụ kpọrọ asị nke Google ukwuu - вай фай маршрутизатор цена. Ekwenyere m na iji nweta blogs netwọk (PBNs), n'agbanyeghị ihe ịga nke ọma ha n'oge ahụ, nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mfe iji nweta ihe dị arọ ma bụrụ nke a na-apụghị ịchọta (mgbe ụfọdụ ọbụlagodi irreversible) ogo ọdịda.
Ka o sina dị, blọọgụ netwọk ndị ọzọ ka na-ewu ewu ugbu a, m hụkwala ọtụtụ webmasters novice na-anụ ụtọ azụmahịa ahụ ma na-erite uru site n'ọganihu dị mma na nke ọma na SEO. Ma olee eziokwu? Kedu otu esi eme mkpebi mara mma banyere backlinks site na blọọgụ netwọk? Ka anyi gbalịa ime ka ihe nile doo anya - nani na otutu ihe omuma na aro di iche iche iji turu uba na uru ha. E kwuwerị, ọ bụ naanị gị ka ị ga-esi kpebie.
Backlinks si Network Blogs dị mma maka:
N'ịchịkwa SEO, ana m ekwu na ị nwere ike inweta ike dị ukwuu karịa ndị na-asọ mpi gị. Ihe niile dị mfe - ịzụta njikọ site na PBN pụtara na ị nweere onwe gị iji hazie njikọ gị dịka ọnyà iji nwalee nhọrọ ọ bụla nwere ike ịchọta onwe ha na arịlịka ederede ha. Ee, ọ bụ ihe mara mma - naanị n'ihi na ọ dịghị usoro ọzọ na - enye nnwere onwe ịlele ihe niile na - arụ ọrụ - ebe a ma ugbu a.
Na-erite uru site n'aka ikike dị elu nke oge a, dị ka PBN na ị nwere ike ime ka onye agadi na ntụkwasị obi a tụkwasịrị obi nke ebe nrụọrụ weebụ dị ugbu a - n'enweghị oge ọ bụla. Ịzụta backlinks site na blọọgụ netwọk nwere ike iyi ọbụna ihe mara mma karị, karịsịa na-eche na ụdị njikọ a bụ ihe siri ike na-ewu na ụzọ dị mma.
Ichekwa oge na mgbalị, nanị n'ihi ịkụ nzọ na PBN - ịkwesighi ịrụ ọrụ na mgbapụ ma ọ bụ ịzụlite mmekọrịta ọzọ. Mụ onwe m, ọrụ dị oke mkpa iji chọpụta ohere kwesịrị ekwesị maka ịbịaru ọbọ bụ eleghị anya oge kachasị njọ na-ewe oge m nwetara.
Ọ bụ ezie na PBN bụ nnukwu oge na-atụgharị uche, ha na-ahapụ ọnụ ụzọ meghere iji merie nsogbu ndị siri ike na njikọ njikọ ọdịnala. Dị ka ihe atụ, m na-ekwu na mgbe ụfọdụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume inweta ndị a dị elu PR backlinks site na ndị agadi ma tụkwasị obi ngalaba. Ihe a na-eme yiri ka ọ naghị arụ ọrụ ọbụna tupu i rute ya, ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na ị gaghị emebi iwu. A sị ka e kwuwe, itinye oge gị na mgbalị gị n'ịmepụta mmekọrịta dị mma ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ a na - atụghị anya ya - enweghị ike inye gị atụmanya ọbụla ma ọ bụ ihe ndị a na - agaghị ahụ anya, ọ bụghị iji kwuo na ọganihu a na -.
Ọfọn, ebe a bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị njọ banyere backlinks site na blọọgụ netwọk, naanị maka izu ezu. N'ọnọdụ kasị njọ, iji PBNs maka ụlọ njikọ nwere ike ịkpata ntaramahụhụ akwụkwọ - mgbe ụfọdụ ọ pụrụ ọbụna ịgabiga oke ókè mgbe ihe nile mechara kwụsị na nchọta.Ọ bụrụ na ọ ga - eme otú a, ọ gaghị enwe ihe ọ bụla ị ga - eme, ma e wezụga maka ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ gị jọgburu onwe ya ma ọ bụ blog nile - site na mbido.